1) Master Nadiif ah
Description: adduunka ayaa ugu kalsoon Android Optimizer, Speed ​​talala oo app Free Anti-Virus, nadiifi Master caawisaa dardar iyo nadiifinta ka badan 400 milyan oo taleefannada! Waxa kale oo uu bixiyaa ilaalin waqtiga dhabta ah ay # 1 antivirus engine oo heshay xogta gaarka ah la shaqayn AppLock ah.
Faa'iido: Multi functional, fududahay in la isticmaalo, waxqabad iyo nadiif interface user
Qasaarooyinka: Wax cusub in lagu daro in dayactirka iyo nadiifinta, tababaraha app waa loo baahnayn
2) du Speed ​​buusterka
Description: Du Speed ​​talala oo kaa caawin kara sidii aad u badbaadiso phone smart leh oo lacag la'aan ah ka dhisay muuqaalada ammaanka. Waxaa nadiifinayaa nidaamka ka files aan la rabin oo kordhiyaa meel aad kaydinta.
Faa'iido: xawaare aad android telefoonka ama kiniin ah, marti xamuulka ah qalabka loogu talagalay dayactirka phone smart, user interface macaan.
Qasaarooyinka: nadiifinta Raam oo inta badan ah arimo halkan iyo halkaas ayaa waxay keeni kartaa.
3) SD Yartoy
Description: Waa app ah kaydinta iyo dayactirka loogu talagalay oo lacag la'aan ah ilaa meel ku qoran kaarka SD ama xasuusta gudaha. Faa'iido: Waxaa regains xasuusta qaali ah oo nadiif ah oo hagaagsan.
Qasaarooyinka: Yimaado leh "isticmaalo gaar ah halis" ah oo fariin.
Description: Waxaa kor u dadajiyaa phone oo Fayda junk si ammaan ah, Daahiriyo khasnado codsiga.
Faa'iido: Free si ay u isticmaalaan, habka nadiifinta awood badan.
Qasaarooyinka: Sida utility nadiifinta kasta oo keeni kara dhibaato haddii overzealously loo isticmaalo.
Description: element kale in la hoos ayuuna telefoonka aad Android waa launcher u caado in saaraha ayaa lagu rakibay. Haddii aad ka heli dhan taas sii dheer iyo doodads maaweeliya, ama ka xun, haddii aad dareentid in ay dhab ahaantii hoos u dhig telefoonka, ka fiirsan qaadan launcher ah customizable sida Nova Launcher. Fast oo quruxsan .
Faa'iido: aragnimo Android saafi ah; hagaajinta dareen leh; qaab degdeg ah.
Qasaarooyinka: Waa heli mawduuc cusub gacanta; xad widgets iyo fur-tago yar; saamaynta aad u yar oo gaar ah.
6) processor tuner
Description: tuner processor kuu ogolaanayaa inaad si ay ula socdaan oo tweak qaab aad processor ee , astaysto goobaha loogu taliyaha processor aad, ka yar saacad ah si loo badbaadiyo batari, in ka badan saacad si loo hagaajiyo kartida, oo wuxuu u yeelay qaab profiles kicin ku saleysan kala duwan si loo hubiyo in aad processor u qabata habka kaliya ee aad rabto.
Faa'iido: An uriya oo dhan ka dhex tartanka.
Qasaarooyinka: interface user ayaa laga yaabaa inuu kor ayaa loo qaaday.
7) qalabeed 3c
Waxaa lagu talinayaa in xiddigaha: 5
Description: qalabeed 3c, oo hore loogu yaqaanay Android tuner, iyadoo tan ah qalabka baadhista iyo tweaking in user a bixio isticmaali karaa in lagu ogaado iyo hagaajinta caafimaadka ee ay nidaamka siisaa dadka isticmaala. Qalabeed waxaa ka mid ah tababare hawsha si ay u maareeyaan (ama dilaan) aad barnaamijyadooda, gurmad ama soo celin APKs.
Faa'iido: Aad iyo aad u awood badan, fududahay in la isticmaalo, la iman hawlaha dheeraad ah in aad si dhab ah u isticmaali kartaa, hadda on sale
Qasaarooyinka: Ogolaanshaha iyo xayiraad.
8) Control Device
Description: Xakamaynta Device waa app ah la socodka nidaamka tweaking iyo qalab waxay ka faa'idaysanaysaa rukhsadda kacsantahay qalab rujin in laydin sii tweak badan oo qalab iyo OS goobaha. Users reserved kartaa processor iyo GPU mawjadaha in ka badan ama ka yar saacad, awood ama sifooyinka qalabka Disable gaar ah sida garaaca-On iyo xoog gariirka.
Faa'iido: App siinayaa waalidiinta xakameeyo in meel fog laga xirto oo lagu furo taleefannadooda, in xal loo helo dhibaatada carruurta ma soo laabtay wac waalidka ka mid ah Nabiyada.
Qasaarooyinka - nuglaanta la fili karo in la uninstalled by ilmaha, sool iyo isticmaali karto polish guud ee leh waayo-aragnimo user iyo user interface.
Description: Iyadoo goobaha menu Android qaar ka mid ah aragti ku saabsan xaaladda batteriga iyo inta tamarta waa la isticmaalo wuxuu bixiyaa users, users farsamo ahaan u janjeedha ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ka fog dhamaystiran oo la daadiyo sida BetterBatteryStats .
Faa'iido: Easy "Tayadoodii" button fidiyaa awooda batariga, version pro ka mid ah hababka horena xoogga laga beddeli karaa, wax badan oo kormeerayaasha iyo stats ku saabsan batteriga.
Qasaarooyinka: dhibaato sudhnaa
Description: Greenify asal ahaan ka dhigeysa app ah in gobol ka mid ah isu suuris, aan awoodin inay helaan khayraadka nidaamka, bandwidth ama hababka soo jeeda ordi. Si kastaba ha ahaatee, Greenify kuu ogolaanayaa inaad u ordaan app ah sida caadiga ah in sawir marka si cad loo yaqaan by user oo aan wax buuq dheeraad ah.
Faa'iido: UI Tixgelinta oo si fudud navigable, auto analyzer miyir ku aragto hogs khayraadka iyo barnaamijyadooda fiicnayn.
Qasaarooyinka - baahan yahay helitaanka xididka. Dhammaan app soo jeeda shaqeynta joogsanaysa app ah waa in isu suuris, taas karnaa barnaamijyadooda qaar aan waxtar lahayn oo kale digniinta, iyo barnaamijyadooda bulshada.
> Resource > Android > 10 Optimizers Best u Android